बालुवाटार जग्गा प्रकरण : माधवकुमार र बाबुरामको पालाको निर्णय झिकाउन आदेश Canada Nepal
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : माधवकुमार र बाबुरामको पालाको निर्णय झिकाउन आदेश
चैत्र १६ २०७७
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई सरकारको पाला भएको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा विभिन्न उच्च व्यक्तिसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसहितलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले संलग्न अन्य व्यक्तिलाई पूरक अभियोगपत्र दायर हुनुपर्ने जिकीरसहित २०७६ माघ २९ गते रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सोमबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालमा भएका मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो ।
आयोगले भने मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने जनाएको थियो । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार र भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै २९ माघ २०७६ मा रिट दायर गरेका हुन् ।
यसअघि २ फागुन २०७६ मा यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो । आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलले गत २ फागुनमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि सोमबार न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले माधवकुमार र डा. भट्टराई सरकारको पालामा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भएका निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो ।
चैत्र १६, २०७७ सोमवार १५:४२:०७ बजे : प्रकाशित
# बालुवाटार जग्गा प्रकरण